इन्टरनेटका अश्लील सामग्रीको लतमा परेका महिला तथा किशोरकिशोरी के भन्छन ?
नेपालदृष्टि । सन् २००९ मा सिविन-नेपालले काठमाण्डूका विद्यार्थीमाझ गरेको एउटा अध्ययनमा ३६ प्रतिशत किशोरकिशोरीले इन्टरनेटमा अश्लील चलचित्र हेर्ने गरेको बताएका थिए।
सन् २०१५ मा एउटा जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये २०\_८० प्रतिशतले अश्लील सामग्री हेर्नका लागि इन्टरनेट चलाउने जानकारी दिएका थिए।
बिश्वमै सन् २०१० मा ३०० अश्लील चलचित्रमा गरिएको एक अध्ययनमा ८८ प्रतिशत चलचित्रमा शारीरिक हिंसा भएको पाइएको थियो।
मलाई लाग्छ विद्यालयले बालबालिकाहरूलाई राम्रोसँग यौनका बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ, भन्ने यौन बिशेषसज्ञहरुको भनाई थियो ।
विद्यालयमा यौन र अश्लील चलचित्रबारे आवश्यक कुरा गरिँदैन। तर पनि लत परिसकेकाका लागि विद्यालयले सिकाएन भने अश्लील चलचित्रले सिकाउँछ भन्ने ढास राख्छन । र, कसैले पनि, विशेषतस् बालबालिकाले अश्लील चलचित्रबाट यौनका बारेमा सिक्नु हुँदैन ।
किशोरावस्थामा अश्लील चलचित्रबाट यौन शिक्षा लिनु ठिक हो होइन भन्ने जिज्ञासामा अमेरिकी लेखिका इरिका गार्जोले ट्यूटरमा यस्तो लेखेकी छन :
अमेरिकी लेखिका ३६ वर्षीया इरिका गार्जाले १२ वर्षको उमेरमा राति टीभीमा केही अश्लीलता भएको चलचित्र हेर्न सुरु गरिन् ।
यो सन् १९९४ को कुरा हो जतिबेला इन्टरनेट भर्खरै विकसित हुँदै थियो ।
मलाई मेरुदण्ड बाङ्गिने समस्या आयो अनि विद्यालयमा जाँदा विशेष प्रकारको लुगा लगाउन थालेँ जसले गर्दा त्यहाँ म आफूलाई भिन्न र एक्लो महसुस गर्थे, उनी भन्छिन्।
एक्लोपनबाट बच्ने र खुसी हुने प्रयासमा म अश्लील चलचित्रहरू हेरेर हस्तमैथुन गर्थेँ।
अश्लील चलचित्र मेरो लागि दिक्दारी वा चिन्ताको बेलाको साथी भयो। तर त्यसले मलाई अरू क्रियाकलापमा सहभागी हुनबाट रोक्यो। यसले गर्दा म झन् एक्लो महसुस गर्न थालेँ र मलाई मभित्र नै केही समस्या छ किन भन्ने लाग्न थाल्यो।
उनले लेखिन्, सामान्यतया समूहगत यौन सम्पर्क रमाइलो लाग्थ्यो, तर सधैँ होइन।मैले खोजिरहेँ, थुप्रै नग्न तस्बिरहरू हेरेँ र अन्तिममा मैले खोजेको जस्तो वस्तु पाएँ। त्यो पुरानो चलचित्र थियो जसमा ५०० जना पुरुष थिए।
मैले हेरेँ, तर त्यसपछि मलाई रमाइलो लागेन। म बिरामी जस्तै भएँ। दोषी महसुस गरेँ।
अश्लील चलचित्रले मलाई धेरै तरिकाले असर गर्‍यो, उनी भन्छिन्, ूयसले गर्दा मलाई अन्य अवस्थामा सोच्नै नसक्ने यौन क्रियाकलापतिर आकर्षित गर्‍यो।
मैले पुरुषबाट हिंसक व्यवहारको आशा गर्न थालेँ।
मेरो शरीर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि असर गर्‍यो। मलाई जीउ भएको रौँ हटाउन मन लाग्थ्यो किनभने त्यस्तै महिला म स्क्रीनमा देख्थेँ।
के अश्लील चलचित्र हेर्नै हुन्न त ?
इरिका भन्छिन्, अश्लील चलचित्र हेर्नै नहुने होइन । यो मदिराजस्तो हो . कोही एक गिलास पिउँछन्, कोही बोतल नै रित्याउँछन्।
अहिले नेपालको अवस्थामा इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग पुस्तिकाका अनुसार बालबालिकामा यस्ता प्रकारका असर परिराखेका छन :
 अश्लील चलचित्र हेरेपछि बालबालिकामा उमेर नपुग्दै यौनप्रति रुचि देखिन थाल्छ
 यौन सामान्य र सहज हो भन्ने छाप पर्छ
 उनीहरू समकालीन वा वयस्कहरूसँग उत्तेजक व्यवहार गर्न थाल्छन्
 परिवार र साथीभन्दा बेग्लै बस्न रुचाउँछन्
 लागुपदार्थको कुलतमा फस्न सक्छन्
 अध्ययनप्रति रुचि नदेखाउने र आत्महत्यासम्मको प्रयास पनि गर्न सक्छन्।
श्रोत - बीबीसी नेपाली सेवा
जेठ २४ गते बजेट अधिवेशन गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय
मन्त्रिमण्डलको हेरफेर सुरु
नेपालमा आजदेखि दैनिक एक पटक रेल सञ्चालन
हावा हुरीसहित वर्षाको सम्भावना
माओवादीको आजको बैठकले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउँदै
हार्दिक बधाई एवं सुखद दाम्पत्य जीवनको शुभकामना
मंगल धुन बजाउनको लागि पञ्चेबाजा (भिडियो सहित)